HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasNaadiga Sivas Demirspor wuxuu furaa Xilli cusub
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, TURKEY 0
sivas demirspor naadi xilli ciyaareed cusub
Naadiga Sivas Demirspor 2019-2020 ayaa furmay xilli ciyaareedka. Barnaamijka furitaanka xilliyeed ee kooxda Sivas Demirspor Club Tüdemsaş Maareeyaha Guud iyo Gudoomiyaha Sivas Demirspor Club Mehmet Basoglu, Xoghayaha Sivas Laanta Sivas Xoghayaha Maaliyadeed Kemal Khabiir, xubno ka tirsan guddiga Sivas Demirspor Club, tababarayaal iyo ciyaartooy ka howl gala laamo kala duwan oo ka tirsan Sivas Demirspor Club ayaa ka soo qeybgalay.
Dhibbanayaashu waa la gowracay ka hor xafladda furitaanka xilli-ciyaareedka cusub. Maamulaha guud ee Tüdemsaş ahna gudoomiyaha Sivas Demirspor Club Mehmet Başoğlu, oo khudbad ka jeediyay xafladda furitaanka, ayaa yidhi, saidgı Waxaan salaamayaa dhammaan bulshada Sivas Demirspor Club xushmad iyo kalgacal. Naadigeennu wuxuu ahaa isu socodka isboortiga ee laamo badan oo ku yaal Sivas iyadoo halgankiisu u muuqdo tan iyo markii la aasaasay, 1940, kaabayaasha kaabayaasha isboorti ee Turkiga iyo ciyaartoydii ay heshay. Waxaan u rajaynayaa xilli cusub inuu noqdo mid bulshada u horseed u ah isla markaana bulshada u rajeeya waxaanan u rajaynayaa inaad sii waddo guusha. ”
Xoghayaha Sivas Laanta Sivas Xoghayaha Laanta Maaliyadeed ee Kulliyada gaarka ah ee ciyaaraha isboortiga Turkiga iyo kooxda naadiga Sivas Demirspor ayaa ku soo wanaagsanaanaya isla markaana rajo wanaagsan leh, ”ayuu yidhi.
Kooxda Sivas Demirspor Club ayaa u dabaaldegaysa sannad-guuradooda 75 25 / 12 / 2015 Sivas Demirspor Club u dabaal sanad xnumx'inc ay: In 75 ka 'soo bax Workshop Sivas' Sivas abuurayaa Demirspor Club in 1939 haddadan la TÜDEMSAŞ magaca aan mar laga badiyay. Ujeedadu waa in la siiyo dadka dhallinyarada ah qaaday jidadka bulshada, waa in ay taageeraan horumarka jirkaaga iyo maskaxdaada ah. site Demirspor Club ee Soccer, Basketball, Laliska, Musaaricadu, cayaaraha fudud, feerka, ciyaartoyda Taekwondo tababaray laamaha. Kooxda ayaa la xaaladda dugsiga sports ah Sivas, guul caalami ah oo ku saabsan aagga legdinta la helay. Sivas Demirsporl in bilado soo noqdo tartamada ay ka qayb-galay dhalinyarada ah. Qeybta kubadda cagta, Sivasspor iyo kooxo kale oo tababaraya ciyaaro fara badan oo Demirsporkan oo soo xirtay lebiskii: Agility Football
Sivas Demirspor Club: Tani waa Calankeena 21 / 07 / 2016 Ciyaartoyda dhalinyarada ee ciyaaraha isboortiga ee Sivas Demirspor Club ayaa ka soo muuqday mudaharaadkii ugu muhiimsanaa ee dalkeena dalkooda, calanka iyo amarka dimuqraadiga. Ciyaartoyda dhalinyarada ah ee soo bandhigay dareenkooda mustaqbalkooda iyo isku dayga afduubka khatarta ah ee lagu qaaday jawiga nabadgelyada ee dalkeenna ayaa la yimid Turkiga. Kooxda Sivas Demirspor Naadiga Isboortiga ee xagaaga ayaa dhameystirtay tababarkooda tababare Mehmet Yadigar Inat oo ah labo kulan oo isku xigta.
Sivas Demirspor Naadiga Guud ee Caadiga ah ee Held 19 / 06 / 2019 Tareenka - Ururka Shaqaalaha Golaha Guud ee lagu qabtay hoolka shirarka waxaa lagu qoray liiska kaliya. Tüdemsaş General Mehmet Başoğlu dhammaadkii doorashadu wuxuu ahaa madaxweynaha cusub ee kooxda Sivas Demirspor Club. Agaasimaha Guud ee Adeegyada Dhalinyarada iyo Cayaaraha Erdogan Tunc, Maamulaha Warshadaha Tifaftirka Baadhitaanka Cali Karabey, TCDD 4. Ku-xigeenka Agaasimaha Gobolka Cemalettin Gültekin, Guddoomiyaha Ururka Dimoqraadiga Sivas Murat Kütük, Wakiilka Gawaarida ee Hayrettin Stars, wakiilada Amateur Sports Club iyo xubno ka tirsan Naadiga Demirspor ayaa ka soo qayb galay. Xoghayaha Guud wuxuu bilaabay inuu abuuro guddi golaha oo hoos imaanaya madaxtooyada Hayrettin Yare, wakiilka gobolka Football.
Sivas Demirspor Kulanka Kooxda Kulanka Held 06 / 07 / 2019 Maamulka Isticmaalka Naadiga Sivas Demirspor Ka dib markii Golaha Dhexe ee Tudiga ee Tuddagbeq Nuri Demiraj ay wada yimaadeen. Kulankii ugu horreeyay ee Guddoomiye-yaasha ee lagu qabtay guddomiyaha Madaxtooyada iyo Tüdemsaş General Mehmet Başoğlu, qaybinta waajibaadka ayaa la sameeyey. Guddiga Naadiga Naadiga Sivas Demirspor dhamaadka kulanku, hawlaha naadiyada, mashaariicda lagu sameynayo xilliga cusub iyo qaabeynta dhaqaalaha kooxda ayaa laga wada hadlay. Iyadoo ciyaartoyda ruqsad haysta ay udhowdahay 800 iyo 5 oo ku yaala kala duwanaanshaha, ujeedadu waxay tahay in la keeno carruurta iyo dhallinyarada ciyaaraha isboortiga iyo inay siiyaan fursado ay ku sameeyaan ciyaaraha isboortiga Sivas Demirspor Xarumaha oo leh faham waxtar badan halkii ay ka qabsan lahaayeen maskax tartan. Qaybinta Hawlaha waa tan
Maanta taariikhda: 29 October 1932 Kayseri Demirspor Club ayaa la aasaasay. 29 / 10 / 2012 29 Oktoobar 1919 Gobolka Waqooyi Bari ayaa la wareegay gaadiid militari. 15 January-15 Abriil 1920 boqolkiiba 50 boqolkiiba, 16 April - 30 1920 boqolkiiba ayaa kordhay inta u dhaxaysa April 400 April. Taariikhdaas kadib, waxaa si gooni ah loogu dhawaaqi doonaa. 29 Oktoobar 1932 Kayseri Demirspor Club ayaa la aasaasay. 29 Oktoobar 1933 Dhismaha Khadka Sivas-Erzurum Jamhuuriyadda 10. ayaa la bilaabay sannadguuradii. Jidka Tareenka ee Jamhuuriyadda 10. Sanadka Xaalad gaar ah oo la soo saaray. 29 Oktoobar 1944 Fevzipaşa-Malatya-Diyarbakır-Kurtalan ayaa la furay.
Kooxda Sivas Demirspor Club ayaa u dabaaldegaysa sannad-guuradooda 75
Sivas Demirspor Club: Tani waa Calankeena
Maanta taariikhda: 29 October 1932 Kayseri Demirspor Club ayaa la aasaasay
Maanta taariikhda: 15 June 1931 Kooxaha Demirspor ee Izmir
Sivas Demirspor ayaa abaalmarin la siiyay